चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीले किन देखाए प्लेकार्ड « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 14 June, 2020 8:17 pm
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकमा खटिएका सुरक्षाकर्मी आज हात हातमा प्लेकार्ड लिएर उभिए । सवारी चालक तथा पैदलयात्रुसमेत अचम्म मानेर हेरे । लकडाउन जारी रहेको बेला सुरक्षाकर्मी किन प्रदर्शनमा उत्रिएका होलान् ? झट्ट देख्ने जो कोहीले यस्तै सोच्न सक्छन् । पछिल्ला दिनमा राजधानी काठमाडौँलगायतका विभिन्न स्थानमा विभिन्न माग राखी प्रदर्शन भइरहेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।
यद्यपि सरकारले सोमबारदेखि लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउने भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसमेत दुई सत्रमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । लकडाउन फरक रुपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बेला चोकचोकमा सुरक्षाकर्मी किन प्लेकार्ड लिएर उभिएका होलान् ? आम मानिसको जिज्ञासा हुन सक्छ । लामो समय घरबाट बाहिर ननिस्केका नागरिक कामका सिलसिलामा बाहिर निस्कँदा देखिने यस्तो दृश्यले ध्यान तान्न सक्छ । चोकचोकमा सवारी व्यवस्थापनका लागि उभिएका ट्राफिक प्रहरीले देखाएको प्लेकार्डमा लेखिएको छ–‘अनिवार्य रुपमा मास्क प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ ।”
महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालका अनुसार कोरोना भाइरसबाट सडक प्रयोगकर्तामा हुने जोखिमप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराउन अभियान थालिएको हो । उपत्यकाका मुख्यमुख्य चोक एवम् भीडभाड हुने क्षेत्रमा नागरिकलाई सचेतना जगाउन, सामाजिक दूरीको पालना गराउन तथा सवारीसाधनमा हुने भीडभाड कम गराउन प्लेकार्डसहितको ट्राफिक प्रहरी टोली खटाएको ढकालले जानकारी दिए ।
अभियानको महत्वका बारेमा थप प्रकाश पार्दै ढकालले भने, “टोलीले सधैँ मास्क लगाएर यात्रा गर्न, जोरबिजोर नियम पालना गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, जथाभावी हिँड्डुल नगर्न, भीडभाड गरी नबस्न र यात्रा नगर्नका साथै ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न विशेष अनुरोध गर्नेछन् ।” आजदेखि दैनिक बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म र बेलुका ४ देखि ७ बजेसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम जारी रहनेछ ।
महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन नागरिकलाई सावधानी गराउनका लागि सो अभियान थालिएको बताए । त्यसरी परिचालित प्रहरीमध्ये केहीले पिपिई लगाएका छन् । पिपिई लगाएका प्रहरीले सवारीको जाँच गर्नेछन् । यस्तै मास्क, पञ्जा चस्मा लगाएका ट्राफिक प्रहरी भने आफ्नै नियमित पोसाकमा नै खटिएका छन् ।
यसअघि पनि ट्राफिक प्रहरीले कहिले विद्यार्थी त कहिले सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी गराएर ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम चलाएको थियो । अभियानले एक त सर्वसाधारणमा चेतना वृद्धि हुने र ट्राफिकले खेल्नै भूमिका र उनीहरुको समस्याका बारेमा बुझ्ने हुँदा स्वयं पनि परिवर्तन हुने विश्वासका साथ अभियान चलाउने गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीको उक्त अभियानलाई सवारी चालक तथा पैदलयात्रुले समेत सराहना गरेका छन् । शान्ति सुरक्षा एवम् सवारीसाधनको व्यवस्थापनसँगै सचेतनाका लागि परिचालित भएकामा सरोकार भएकाले धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
Tags : ट्राफिक प्रहरी